Ego Mbupu | Importgbọ M Mbubata
Ego ole ka ọ na-eri iji ụgbọ mmiri?
Dabere na ebe ụgbọ gị dị na ụwa na-agbanwe mkpokọta ọnụ ahịa nke mbupu. Mana ụdị mbufe ejiri rụọ ọrụ nwekwara ike imetụta oke ọnụ ahịa nke mbubata. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ mkpa gị.
Ebee ka ụgbọ ala gị dị?
N'ikwu okwu n'ozuzu, ka ụgbọ ala na-aga n'ihu, ọ ga-efu ya.
Somefọdụ mba dịka United States na-efu ihe ka ukwuu mgbe ha si na West Coast na East Coast na mba ndị ọzọ ebe a na-ebufe ụgbọ ala n'ọdụ ụgbọ mmiri na-adịkarịghị eji.
Anyị nwere ndepụta nke ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị ọnụ ala ma mee ka ụgbọ gị gaa n'otu n'ime ebe ndị a iji hụ na ejiri ụzọ njem kachasị rụọ ọrụ.
N’ebe enwere ike ibugoro ugbo ala gi na ugbo ala ndi ozo iji nye ego kacha mma. Anyị na ndị anyị na-arụkọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji chọta gị ọnụahịa kachasị mma mgbe ị na-ebugharị ụgbọ gị.
N'ihi na ọnụ ọgụgụ nke ugbo ala anyị ụgbọ mmiri si a dum agwaogwa nke ọdụ ụgbọ mmiri anyị ga-igba ebe ọ bụla o kwere omume.
Cargbọ M Mbubata dị ka azụmaahịa na-enye ọnụ ụzọ zuru ezu maka ndebanye aha ụlọ ka anyị wee na-anwa ịchekwa ụgwọ dị ala dị ka o kwere mee maka gị.
Mba ụfọdụ dịka South Africa chọrọ ọrụ ọzọ iji kpochapụ ụgbọala ahụ. Nke a bụ ụgwọ ị nwere ike ịbụ na ị chọpụtabeghị mgbe ị na-ekpebi ibuga ụgbọ gị na United Kingdom.
Anyị nwere ọtụtụ ndị ọrụ kọstọm nwere ike inyere aka na usoro ndị a.
Ego ole ka ị ga-akwụ?
Ppingbupu ụgbọ ahụ bụ akụkụ nke ụgwọ iji webata ụgbọ na United Kingdom mana enwere ike ịkwụ ụtụ maka ụgbọala ahụ.
Na-ebubata na Europe
Ọ bụrụ na ị na-ebubata ụgbọ ala nke abụọ n'ime UK site na EU, ị ga-akwụ ụgwọ VAT belụsọ ma ị na-ebute ụgbọala ahụ na United Kingdom n'okpuru atụmatụ ToR. Gaghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla, yana maka ụgbọ ala, ihe karịrị afọ iri atọ, ihe VAT belatara na 5%.
Tupu Brexit, enwere ngwongwo na-agagharị n'efu, mana nke a anaghị emetụta maka United Kingdom ahapụla European Union ugbu a rue Jenụwarị 2021.
Na-ebubata site na mpụga Europe
Kwaga UK - Ọ bụrụ na ị na-akwaga UK ma chọọ iweta ụgbọ gị, ị gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla mbubata ma ọ bụ VAT. Nke a na-enye gị ịnweta ụgbọ ala ahụ ihe karịrị ọnwa isii ma bie na mpụga EU ihe karịrị ọnwa 6. Anyị chọrọ akwụkwọ ọnụahịa ịzụta ma ọ bụ akwụkwọ ndebanye aha iji gosipụta ogologo nke ịnwe ụgbọ ala yana ụgwọ ọrụ ọrụ ọnwa iri na abụọ, nkwupụta ụlọ akụ ma ọ bụ nkwekọrịta ụlọ ịzụta / mgbazinye iji gosipụta ogologo oge ị bi na mba ahụ.
Carsgbọ ala gboo karịrị afọ iri atọ
Na 2010 enwere ikpe dị egwu megide HMRC nke gbanwere iwu banyere otu anyị si ebubata ụgbọ ala karịrị 30 afọ. Ugbo ala nke no na ala ha, nenweghi mgbanwe obula na chassis, ntughari ma obu braking system na engine, opekata mpe 30 afọ, na nke ihe nlere ma obu udi nke na adighi aba n'ime ihe eji abanye ga-abanye n'okpuru onu ogugu akuko. ọrụ na 5% VAT.
Ọ bụrụ na e wuru ụgbọ ala tupu 1950, a na-abanye ha na-akpaghị aka na akụkọ ihe mere eme nke efu ọrụ na 5% VAT.
Bubata ụgbọ na-erubeghị afọ 30
Emepụtara na mpụga EU - Ọ bụrụ na ịbubata ụgbọ si na mpụga nke European Union (EU) nke wuru na-abụghị EU, a ga-achọ ka ịkwụ ụgwọ ọrụ 10% mbubata na 20% VAT iji hapụ ya na kọstọm UK. A na-agbakọ ego ole ị zụrụ ụgbọ ala ahụ n’obodo ị na-ebubata ya.
Emepụtara n'ime EU - Ọ bụrụ na ịbubata ụgbọ si na mpụga nke EU nke emeburu na EU dịka ọmụmaatụ Porsche 911 wuru na Stuttgart, Germany. Have ga-akwụ ụgwọ mbelata nke ọrụ bụ £ 50 wee bụrụ 20% VAT iji hapụ ya na kọstọm UK.